Inkululeko - uma njalo kuletha injabulo, uthando - lapho ukwethembeka kujabulisa
Amantombazane ayizidalwa ezingavamile. Ngezinye izikhathi asikwazi ukuthi yini esiyifunayo, futhi uma sibona ukuthi kwenzekani nxazonke, sifuna into efanayo, sikhohlwe ngalokho esinakho. Intombazane inenkululeko, kodwa unesoka, hhayi nje umfana, kodwa othandekayo! Indlela yokuthola inkululeko nabathandekayo bakho? "Inkululeko - uma kuqhubeka ukuletha injabulo, uthando - lapho ukwethembeka kujabulisa" - isihloko sesihloko sethu. Futhi-ke, lokhu kusho ukuthini, ngizochaza ngezansi.
Ake siqale ngeqiniso lokuthi uma ebuhlotsheni ucabanga ukuthi usegodini, lobu buhlobo akusikho okudingayo. Iqiniso lokuthi unomuntu ovamile futhi lokuthi ekugcineni uthola ubudlelwano obuhlala njalo okufanele bujabulise wena futhi bulethe injabulo. Ukuvumelana kufanele kukulethe injabulo futhi lokhu kuyoba inkululeko kuwe. Futhi uma ungafuni ukubheka abanye abantu, kodwa ufuna ukubuka uphinde uphile isoka lakho kuphela, khona-ke lokhu kuyisignali eyinhloko oyithandayo, futhi lokhu ukuthembeka kufanele kukujabulise. Abanye abafana ngeke balethe injabulo eningi kuphela kusukela ebusweni babo, njengothandekayo.
Kodwa yini okufanele uyenze lapho bonke abajabulayo bekhohliwe, futhi befuna inkululeko eyayike yangaphambili ngaphambi komfana othandekayo? Ngizokutshela ngesibonelo, isimo sizansi, abangane ababili bahlangane, omunye unomfana ohlala njalo nothando olukhulu, kodwa ngezinye izikhathi uyakhohlwa ngokuphelele ngakho, futhi uqala ukuphupha ngokuphila okudlule lapho engakabi nayo okwamanje. Futhi enye intombazane "iyindiza yamahhala", isivumelwano esisodwa ku-cinema, enye isinika izimbali, owesithathu ulinde emnyango futhi uyavuma ngothando. Omunye uthanda izingubo ezilula ezingavamile, i-jeans kanye nama-sweatshirts, kanti omunye uhlale ehlungwa kahle, ngokuzikhandla nokuzenzela, ama-styling nezithende, futhi, naphezu kwalokhu, omunye unomuntu onothando kumadlingozi, kanti omunye unamadethi amancane kuphela. Amantombazane amabili ahluke ngokuphelele. Omunye usukhulile, omunye uphansi, amaphupho munye manje ngobuhlobo obungenandaba ngaphandle kokuzibophezela ngaphandle kokuthandana, kodwa kuphela ngokuthanda, njengangaphambili, njengangaphambili, ngaphambili, ngaphambi kokuhlangana naye, kanti omunye ufuna ngokushesha "ukungena kumuntu omdala indlela ". Ngakho-ke, umbuzo uwukuthi, thina amantombazane siyifunani ekugcineni?
Uthando! Yiqiniso, sifuna uthando olukhulu futhi oluhlanzekile, kodwa sasize sicabange nokuthi kuzokwenzekani emva kokuthola uthando lwethu? Lokhu kungafaniswa nomshado ... siphupha ngomshado, sigqoko esimhlophe, izimbali, izindandatho zamadayimane, uhambo oluhle lomshado, kodwa sicabanga ukuthi yini esilindele kwelinye uhlangothi lolwandle lomshado? Luhlobo luni lokuphila esiyoba nalo? Awekho amaqembu, ngoba usuvele wesifazane oshadile, akekho isikhathi samahhala, ngoba sonke isikhathi samahhala sizoba ngumyeni wakhe. Ukugeza, ukufaka izinsimbi, ukupheka, hhayi okokuqala kuqala, futhi kuye, okuhlangenwe nakho kuqala, njengokungathi isobho asikwazi ukunqotshwa, noma sengathi ingubo yakhe ayinakunqotshwa, noma ukuthi angeke abone uthuli phansi, njalonjalo.
Into efanayo esiyithola ngemva kokuthola uthando, asikwazi ukushintsha amanoveli asheshayo, ukungabonisi ngothando ohlangothini, ukungathandana namadoda, ngezinye izikhathi akukho amaqembu, ngisho nemihlangano nezintombi - kakade ngubani ozobe enenhlanhla. Ngakolunye uhlangothi, akukho ukucindezeleka okungekho muntu okukudingayo, njalo ukusekelwa kokuziphatha nokusekelwa komoya, futhi akusikho imidwebo phambi kwakho, ngoba uyakuthanda noma kunjalo. Siyeka ukuqonda lokho esiye saqhubeka isikhathi eside, futhi sikhohlwe ukuthi kunzima kangakanani ekuphileni okukhululekile. Kuyinto uthando, ubuhlobo nomuntu othandekayo okufanele alethe inkululeko nokuthokozisa.
Omunye ufuna imibono, ukudlala ngothando, izimbali, ukuze athole, kodwa unomuntu omsindisa emakhazeni nasebumsulwa. Lowo omthanda njalo futhi uyasula izinyembezi lapho bebukela i-melodramas ndawonye. Futhi owesibili ufuna ukuthola uthando lwakhe futhi aphuthume ukuxhuma impilo yakhe kanye naye kunokuba angaqondakali futhi enesizungu, ngoba kubanda kakhulu ebusuku, lapho ukuthula kuphazamisa yonke into futhi uhlala yodwa nemicabango yakhe, futhi akukho ukuphuma kubo. Kuzo zonke izinhlobo zikhona zombili izinhlangothi ezihle nezimbi, kokubili ekuphileni okukhululekile, nasekuphileni okuhlobene nomunye ukuphila? Sidalwe ukuthanda, futhi uthando luyikululeko yethu yangempela, inkululeko engokomoya. Ukuze ngezinye izikhathi uhlukanise ubudlelwane babo, ungabangeza imidlalo, isibonelo, ujwayele futhi, noma udlala ngothando nje lapho uhlangana nabantu, into esemqoka kulokhu kuwukuba nobuciko futhi usetshenziselwe indima. Umfana othandekayo uzokuqonda konke futhi ahambe yonke into ngenxa yowesifazane wakhe othandekayo, into esemqoka yinto elula futhi efinyeleleka ukuchaza.
Sifuna njalo lokho esingenakho, futhi kulula kangakanani ukuyeka lokho esinakho nakwabo abahlala nathi njalo. Cha, akulula ukulahla futhi akulula, futhi kungani kufanele wenqabe? Ukuze uphinde ube nesizungu futhi, bese udlala ezinkampanini lapho ufuna abantu abajwayele ukuxhumana nabo ngenxa yezimbali nezibhodlela ze-champagne? Kungani? Akukho okuzoyifaka esikhundleni sembali egcwele uthando nokunakekelwa, esikunikezwa ngumuntu othandekayo wethu. Ekugcineni, lokhu kusho ukuphila kwethu - othandweni, futhi ukuthola uthando, sithola inhloso yokuphila. Uma ngabe ufuna lokho impilo yakudala, futhi uyeke ukujabulela ubuhlobo nomthandi wakho, khumbula nje ukuthi kwakungalungile kanjani ngaphandle kwakhe, ukuthi wawela kanjani ekucindezelekeni futhi ube nesizungu. Khona-ke lonke uthando ngaye luzobuya kuwe, futhi uzosheshe ufune ukumbamba noma ukumshayela uma engekho. Isifiso sokushiya iqiniso, nokuphila komuntu futhi siphile impilo engajwayelekile kuvela okungenani kanye kuwo wonke umuntu, kuvamile, ngoba "kuhle njalo lapho singekho khona," njengoba ukuhlakanipha kwabantu kusho.
Indaba eyenzeke kimi
Ubudlelwano phakathi komamazala nomalokazana
Indlela yokuqaphela umngane esitheni
Izinkinga zobungane bomshado
Umbukiso oyingqayizivele wezigqoko zikaFilip Tracy eSt. Petersburg
I-Indian Romance: I-Podium evela ku-Morgane le Fay
I-L`Oreal - inkampani yanamuhla yokuzithokozisa
Uninazala ukhuphuka ekukhuliseni ingane
Abathandi beBelief Brezhneva bakholelwa ukuthi ukhulelwe
Sandwich nge-bacon, iqanda noshizi
Izakhiwo eziwusizo nokuphulukisa kwamafutha omnqumo
Ukuqonda kanjani ukuthi umfana unenhloso ejulile?
Isikhumba se-Gym - isitayela esihle sehlobo sasehlobo
I-Mackerel ibhaka ne-garlic ne-parsley
I-horoscope efaneleyo ngesonto likaJanuwari 15-21, 2018
Indlela yokubala i-amygdala